Lufthansa Value yave kuda kungowanda neUS $ 2.5 billion
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa Value yave kuda kungowanda neUS $ 2.5 billion
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • kutakura
Lufthansa inochengetedza kumwe kushomeka pamusika mukuru
Executive Board yeDeutsche Lufthansa AG nhasi, nemvumo yeKambani Supervisory Board, yafunga kushandisa Authorized Capital C kuti iwedzere mari nekodzero dzekunyoresa dzevashandi veKambani. Mugove wekambani wemari yazvino EUR 1,530,221,624.32, yakakamurwa kuita zvikamu 597,742,822, ichawedzerwa nekuburitsa 597,742,822 nyowani-isina kukosha masheya eKambani.
Muna June, eTurboNews yakashuma about chirongwa cheGerman Lufthansa Airline Chirongwa cheCapital kuwedzera.
Mari yakawandisa inotarisirwa kuita maEUR 2,140 mamirioni. Mutengo wekunyorera weEUR 3.58 paNew Share unowirirana nemutero we39.3% paERAT (mutengo wekutanga wekodzero).
Chiyero chekunyorera ndeye 1: 1. Zvikamu zvitsva zvinofanirwa kupihwa kune vagovani veKambani panguva yekunyoresa, inotarisirwa kutanga munaGunyana 22, 2021 uye kupera muna Gumiguru 5, 2021.
Kutengeserana kwekodzero kunotarisirwa kutanga musi waGunyana 22, 2021 uye kupera munaGunyana 30, 2021.
Iko kutengeserana kwakanyatso kunyorwa ne syndicate yemabhangi gumi nemana. Uye zvakare, mari dzinoverengeka uye maakaundi ari pasi pehutungamiriri hweBlackRock, Inc. vakapinda muchibvumirano chekunyora pasi kwemamirioni mazana matatu emadhora uye vakazvipira kushandisa zvizere kodzero dzavo dzekunyorera.
Nhengo dzese dze Executive Board ye Kambani dzakazvipirawo kutora chikamu mukuwedzera kwemari uye kushandisa kodzero dzese dzekunyoreswa dzakagamuchirwa zvine chekuita nezvikamu zvavo zvizere.
Iko kuwedzera kwemari kunoitirwa kusimbisa chinzvimbo cheEquity equity. Iyo Kambani inoshandisa mambure akawanikwa kubhadhara iyo Chinyararire kutora Chikamu I cheEconomics Stabilization Fund yeFederal Republic yeGerman (ESF) muhuwandu hweEUR 1.5 bhiriyoni.
Pamusoro pezvo, iyo Kambani inotarisira kubhadhara zvizere Silent Participation II muhuwandu hweEUR 1 bhiriyoni pakupera kwa2021 uye zvakare inotarisira kudzima huwandu husina kubviswa hweKunyarara Kutora Chikamu I pakupera kwa2021.
Iyo ESF, iyo parizvino inobata 15.94% yemugove wekambani, yaedza kutanga kuburitsa mari yayo muKambani pasati papfuura mwedzi mitanhatu mushure mekupedzwa kwekuwedzera kwemari, kana ESF ikanyorera kuwedzero yemari. Muchiitiko ichi, kupatsanurwa kunozopedzwa pasati papfuura mwedzi makumi maviri nemana mushure mekuvharwa kwekuwedzera kwemari, chero kambani ikabhadhara Chinyaradzo Kutora Chikamu Ini uye Chinyararire Kutora Chikamu II sekufungidzirwa.
Iyo yeruzhinji kupihwa kweNew Shares kuGerman kunoitwa chete kuburikidza uye pahwaro hwechengetedzo prospectus yakatenderwa neGerman Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), iyo ichaitwa kuti iwanikwe, pakati pevamwe, pane webhusaiti yeiyo Lufthansa Boka . Mvumo iyi inotarisirwa kupihwa musi wa Gunyana 20, 2021. Pachave pasina kupihwa kweveruzhinji kunze kweGerman uye iyo prospectus haizobvumidzwe neimwe sangano rinodzora.